दैनिक १ डलरमा काम गर्ने महिला कसरी भइन् विश्वकै धनी ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > फिचर > दैनिक १ डलरमा काम गर्ने महिला कसरी भइन् विश्वकै धनी !
फोब्र्स म्यागजिनले केही दिन अघि मात्र २०१६ का धनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेकोछ । यसका साथै १० विशेष धनीहरुको नामावली पनि सार्वजनिक गरेकोछ । यो नाममा सबैभन्दा पहिलो १ नम्बरमा छिमेकी देश चीनकी एक महिला पर्न सफल भएकी छिन् ।
जोउ कुन्फेई, सन् २०१५ मा चीनकी सबैभन्दा धनीहरुमध्ये ८ नम्बरमा, टेक्नोलोजीको क्षेत्रका सबैभन्दा धनी मध्ये ३० नम्बरमा रहेकी जोउ सन् २०१६ मा हङकङका सबैभन्दा धनीहरुमध्ये ९ नम्बरमा पर्छिन् भने विश्वकै धनीमध्ये २ सय ५ नम्बरमा पर्छिन् । फोब्र्सकै अनुसार ४६ वर्षकी यी महिलासँग ५ दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति रहेकोछ ।
कुनै समयमा सामान्य घडीको सीसा बनाउने कम्पनीमा काम गर्ने यी महिला अहिले लेन्स टेक्नोलोजी नामक सीसा बनाउने कम्पनकीकी मालिक छन् । लेन्स टेक्नोलोजी नामक यिनको कम्पनीले विभिन्न स्मार्टफोन, क्यामेरा तथा कम्प्युटरको लेन्स बनाउँदै आएको छ । यही कम्पनीले नै एप्पल र सामसुङ मोबाइलका लागि सीसा (टच स्क्रिन) बनाने गर्छ । यी दुई कम्पनी उनका विशेष ग्राहकहरु हुन् । विशेष धनीहरुमा १ नम्बरमा आउनुको पछाडि उनको संघर्षको कथा यस्तो छ ।
जोउ १९७० मा चीनको हुनान प्रान्तको एउटा सानो गाउँमा जन्मिएकी थिइन् । ५ वर्षकी हुँदा आमा गुमाएकी उनले घरमा हाँस र सुँगुर हेर्ने काम गर्थिन् । पछि १६ वर्षको उमेरमा विद्यालय शिक्षा छाडिन् र आफ्नो काकाहरुसँग बस्नका लागि गोङडोङ गइन् । त्यहाँ उनले कामको खोजी गर्न थालिन् । उनलाई फेशन डिजाइनर बन्ने इच्छा थियो तर परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा उनी मदजुरका रुपमा काम गर्न थालिन् । त्यहाँ उनले घडीको सीसा बनाउने काम गर्थिन्, जुन काम गरेवापत उनले दिनभरमा १ अमेरिकी डलर पाउने गर्थिन् ।
बिहानको ८ बजेदेखि रातीको १२ या २ बजेसम्म उनी काम गर्ने गर्थिन् । किनकी उनलाई धेरै काम गर्ने र सिक्ने इच्छा थियो । सन् १९९३ मा, २२ वर्षको उमेरमा उनले जागिर त्याग्ने निर्णय गरिन्, उनले ३ हजार अमेरिकी डलर बचाएर राखेकी थिइन् । त्यसपछि केही साथी र परिवारका सदस्यसँग मिलेर उनले कम्पनी खोलिन् । अरु कम्पनीभन्दा राम्रो घडीको सीसा बनाउने वाचा गर्दै उनीहरुले ग्राहक तान्न थाले ।
सुरुको दशकमा उनले निकै कम नाफामा सामान उत्पादन र ब्यापार गर्न थालिन । उनले यो कुरालाई गोप्य नै राखिन् । उनका प्रतिस्पर्धीले यो कुरा धेरै समयसम्म थाहा पाएनन् । उनले लामो समयपछि यो कुरा खोलिन् । उनको सफलताको सुत्र थिए, कडा परिश्रम र धैर्यता ।
यसरी उनले घडीकै सीसा बनाउने काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न थालिन् । यही क्रममा सन् २००३ मा आएको एउटा फोन कलले उनको जिन्दगी नै बदलियो । त्यतिबेलासम्म उनी घडीकै सीसाहरु बनाउने काम गर्थिन् । त्यो फोन कल मोटोरोला कम्पनीबाट आएको थियो जसले उनलाई आफूहरुले बजारमा ल्याउनका लागेको नयाँ फोनका लागि सीसा बनाउन सक्छौ भनेर सोधेको थियो । त्यतिबेलासम्म प्रयोगमा आएका मोबाइल फोनहरुमा प्लास्टिकको स्क्रिन राख्ने गरिन्थ्यो । त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि बिस्तारै उनलाई एचटीसी, नोकिया एवं स्यामसुङ कम्पनीले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिन बनाइदिन आग्रह गर्न थाले ।
त्योसँगै उनको सफलताले सिंढी उक्लिँदै गयो । सन् २००७ मा एप्पलले बजारमा आइफोन लिएर आयो । त्यसको केही समय पछि नै जोउले एप्पलको पनि काम पाइन् ।
अहिले उनको कम्पनीका संस्थाहरु चीनको अन्य १० शहरहरुमा विस्तार गरिसकेकी छन् र ६० हजारले यसमा रोजगारी पाएका छन् । उनले एक अन्तरवार्तामा भनेकी छिन्, त्यो समयमा मेरो उमेरका महिलाहरु विवाह गरेर घर परिवार सम्हालेर बस्थे तर मैले त्यसको सट्टा काम गर्ने र आफ्नो खुट्टामा उभिने बाटो रोजें र आज मलाई कत्ति पनि पछुतो छैन ।’
उनले पहिले आफ्नै कम्पनीका मालिकसँग विवाह गरेकी थिइन् र एक बच्चालाई जन्म दिइन् । पछि उनले ती व्यक्तिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरिन् र लामो समयदेखि फ्याक्ट्रीमा सँगै काम गर्दै आएका साथीसँग विवाह गरिन् र अर्को सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् । उनी हाल आफ्नो परिवारसित हङकङमा बस्छिन् ।
प्रस्तुती : इरादा पहाडी
३० फागुन २०७२ /५:२१
२०७२ फागुुण ३० गते १७:४४ मा प्रकाशित
यी हुन् काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा जित्ने उम्मेदवार !
झुक्यो विराट, पेट्रोलियम ९९ रुपैयाँमै पेट्रोल बिक्री गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय फूटबलमा २३ वर्षपछि नेपाललाई सफलता
बैंकले अब स्थिर ब्याजदरमा पनि ऋण दिने, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो यस्तो निर्देशिका
फाईनान्सको सेयर छ ? अब १ कित्ता सेयर हुनेले यसरी पाउँछन थप १ कित्ता सेयर
बाफिया माथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै, उद्योगी र बैंकर्सलाई वैधानिक रुपमै अलग गर्ने
भोट हाल्ने दिन बैशाख ३१ गते पानी पर्ने सम्भावना !